Ny Forum momba ny fizahantany manerantany dia mandre ny filàna fahitana amin'ny fomba mahazatra
Home » Lahatsoratra farany farany » fivoriana » Ny Forum momba ny fizahantany manerantany dia mandre ny filàna fahitana amin'ny fomba mahazatra
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao farany momba ny Indonezia • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • News sustainability • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • WTN
Forum momba ny fizahantany manerantany
Nofaranana androany 16 septambra 2021 tao Jakarta, Indonesia, ny vovonana Global Tourism Forum (GTF) virtoaly. Ity hetsika ity dia nampivondrona ireo mpitarika ao amin'ny sehatra manerantany hifanakalo hevitra momba ny raharaham-pirenena ankehitriny amin'ny fizahan-tany sy ny fandraisana olona.
Nanamafy ny filohan'ny Birao misahana ny fizahan-tany afrikanina, Alain St. Angle tamin'ny Global Forum Forum ao Jakarta, fa mila fanampiana ara-politika ny fizahantany satria io no lakilen'ny fahombiazan'ny indostria.
Nilaza izy fa ny governemanta indoneziana dia manana tanjaka fizahan-tany maro ary ny firenena dia tokony hampiasa izay rehetra azony atao mba hampitomboana ny fahitana.
Nasongadin'i St. Ange fa amin'ny paositra COVID ara-dalàna dia zava-dehibe ny fankasitrahana fa ny toerana fizahan-tany rehetra dia tokony hanjono amin'ny farihy iray ihany.
Alain St.Ange, ny Seychelles fizahan-tany teo aloha, fiaramanidina sivily, seranan-tsambo sy seranana an-dranomasina ary filohan'ny Biraon'ny fizahantany afrikanina (ATB) ary mpikambana mpanorina ny World Travel Network (WTN), omaly niresaka momba ny Global Tourism Forum izay natao tao Jakarta any Indonezia.
Ny adiresin'i St.Ange, ao anatin'ny tontolon'ny dinika, dia nandrasana fatratra tany Afrika satria fantatra fa nandresy tamin'ny fampitomboana ny fifandraisana ara-barotra sy fizahantany teo amin'i Afrika sy ny ASEAN Block. Alain St.Ange, Mpanolo-tsaina momba ny fizahan-tany izay niorina tao Indonezia nandritra ny fotoana kelikely, dia niasa tamin'ny FORSEAA (Forum of Small Medium Economic AFRICA ASEAN) mba hanosika ny varotra sy fizahantany ho any Afrika avy amin'ny firenena ASEAN.
St.Ange, mpikambana iray ao amin'ny birao ihany koa ho an'ny World Tourism Network izay natomboka vao haingana dia miasa mba hampitomboana ny fahitana ireo toerana fizahan-tany ary hanome feo maharitra amin'ny raharaham-barotra kely sy salantsalany sy fizahantany eto amin'izao tontolo izao izay tsy mahagaga raha maheno ny fahalianana avy amin'ny kaontinanta momba ny adiresiny.
Nanomboka tamin'ny fanamafisana i St.Ange fa mila fanohanana ara-politika ny fizahan-tany satria io no lakilen'ny fahombiazan'ny indostria rehefa niarahaba ny filoha lefitra sy ny minisitry ny fizahantany izy roa noho ny fanatrehany ity fanontana ity. Forum momba ny fizahantany manerantany. Nanohy nanindry izy rehefa nampatsiahy ny Governemanta Indoneziana ny amin'ny fahaizan'ny fizahan-tany maro izay nitahian'i Indonezia, saingy nilaza izy fa "ho very maina izany potika sy fampiasam-bola izany amin'ny fampivoarana azy ireo raha tsy ampiasain'i Indonezia ny zava-drehetra ampiasainy hampitomboana ny fahitana ny firenena. ”
Alain St.Ange koa dia nanipika fa amin'ny ara-dalàna vaovao sy aorian'ny COVID no resahina, zava-dehibe ny fankasitrahana fa ny toera-pizahantany rehetra dia hanjono amin'ny farihy iray ihany ho an'ireo mpitsidika manavaka ary ny toerana misy ny zava-baovao sy voaomana indrindra dia hapetraka tsara kokoa handraisana ny varotra aorian'ny COVID.
St.Angespact momba ny tsena manokana manomboka amin'ny nentim-paharazana ka hatramin'ny fizahan-tany agro, fizahan-tany ara-pinoana, fizahan-tany ara-panatanjahantena, fizahan-tany halal, sns.
Nandany fotoana izy namelabelarana ny filana mametraka ny làlana ho an'ny firenena ary avy eo manome serivisy fampifanarahana vidiny, amin'ny fitadidiana fa ny firenena no tanjona ary mila miomana ny firenena alohan'ny hanamafisan'ny olona iray avy amin'ny tontonana fa “mandeha ny resaka ”dia nanjary zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay.
Nasongadin'ny minisitra teo aloha ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ireo mpifanolobodirindrina sy namana ary notondroiny ho ohatra iray amin'ny kaontinanta iray mila ny indostrian'ny fizahantany i Afrika sy ny Birao fizahantany afrikanina ary mivoaka ny rehetra hampandeha azy.
Ny Forum momba ny fizahan-tany eran-tany 2021 dia nahita ny filoha lefitr'i Indonezia ary ny praiminisitra taloha tany UK ary koa ny Dr. Taleb Rifai, ny sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha, ary ny minisitry ny fizahantany any Indonezia taloha ary teo aloha dia voatanisa miaraka amin'ny filohan'ny ny Forum momba ny fizahantany manerantany.